Hartziekten en hoge bloeddruk Somalisch - Voorlichting Vertaald
Hartziekten en hoge bloeddruk Somalisch
Home Diëtist Hartziekten en hoge bloeddruk Hartziekten en hoge bloeddruk Somalisch
Cudurada cardiovascular ka
Waa maxay cudurada cardiovascular
Cudurka cardiovascular ka waa xeer dalad u ah cuduro kala duwan oo wadnaha iyo xididada ku dhaca. Cudurada cardiovascular ka waa sababta ugu weyn ee dhimashada wadanka Netherlands ka dhacda.
Sababta keenta cudurka cardiovascular ka
Qallafsanaanta xididdada ayaa badanaa ah sababta keenta dhibaatooyinka wadnaha iyo xididdada dhiigga. Ciriiriga qallafsanaantu waxay bilaabmi kartaa da'da hore. Natiijo ahaan, waxay qaadan kartaa sanado kahor intaanay soo bixin dhibaatooyinka wadnaha iyo xididada. Xeritaanka halbowlayaasha (atherosclerosis) awgeed, xididdada dhiigga ee ku jira, tusaale ahaan, lugtaada ama cagtaada ayaa adkaan karta. Natiijo ahaan, dhiiggu si fiican uguma gudbi karo xididdada dhiigga. Natiijo ahaan, oksijiin gaarsiinta ee xubnaha iyo murqaha waxay noqon kartaa mid aan ku filnayn.
Meeqo qof ayaa qaba cudurada wadnaha iyo xididada dhiiga ?
Cudurada ugu badan ee wadnaha iyo xididada ku dhaca waa wadne xanuunka iyo istaroogga. Sannadkii 2016, waxaa jiray dad lagu qiyaasay 739,800 oo qaba cudurrada wadnaha iyo 451,900 oo qaba istaroog.
Kansar ka dib, cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga ayaa ah sababta ugu muhiimsan ee dhimashada Netherland. Cudurada wadnaha iyo xididada ayaa mas'uul ka ah ku dhawaad ​​30% wadarta dhimashada Nederlaan. Tani waxay khusaysaa ilaa 40,000 oo xaaladood sannadkii, kuwaas oo loo qaybiyo qiyaastii si siman ragga iyo dumarka. In ka badan 85% dhimashada cudurada wadnaha waxaa ku lug leh dadka da'doodu tahay 65 iyo wixii ka weyn. Tan iyo 1970-yadii, tirada dadka u dhimanaya cudurrada wadnaha waa ay hoos u dhacayeen. Tani waxay u badan tahay inay sabab u tahay hoos u dhac weyn oo ku yimid tirada dadka sigaarka cabba, ka saarista dufanka trans ee cuntooyinka 1990-meeyadii iyo kordhinta dareenka qaab nololeed caafimaad leh. Horumarinta daawooyinka loogu talagalay cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga, sida kolestaroolka iyo daawooyinka hoos u dhiga cadaadiska dhiigga, iyo hababka daaweynta wanaagsan, sida angioplasty ka dib wadne qabad, ayaa sidoo kale door ka ciyaara.
qoddobo khatar leh
Cilmi-baaris ballaaran iyo mid dheer ayaa muujinaysa arrimaha soo socda ee khatarta ah ee cudurada wadnaha:
Kolestarool isku qasan oo sarreeya oo aan fiicnayn. Tani waa qodobka ugu muhiimsan ee khatarta la xiriira cuntada. Saamiga LDL iyo HDL kolestaroolka iyo heerka triglyceride (walax dufan ah) oo dhiiga ku jirta ayaa si gaar ah muhiim u ah. Tani waxay si gaar ah khatar ugu tahay cudurada wadnaha. Wax badan ka akhri kolestaroolka.
Sonkorowga. Marka heerka sonkorta dhiigga ay sare u kacdo muddo badan, xididdada dhiigga ayaa dhaawacma. Taasi waa sababta dadka macaanka qaba ay aad ugu dhow yihiin inay la kulmaan cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Cadaadiska dhiigga oo kordha. Dhiigbaxa maskaxda waxay si cad ugu xidhan yihiin dhiig-karka.
Kor u kicidda dhiigga xinjirowga. Xinjiro ayaa yarayn kara ama ka hortagi kara qulqulka dhiigga ee marinnada.
Miisaan badan. Dufanka caloosha, gaar ahaan, waa khatar sare.
Jimicsi yar, sigaar cabbid iyo walbahaar.
Nafaqada (fiiri cinwaanka: Doorka nafaqeynta) Arrimaha la iska dhaxlo ayaa sidoo kale kaalin ka qaata horumarinta cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga. Niyad-jabka hidde-sidaha wuxuu kordhin karaa khatarta ilaa 60%. Nederlaan, tusaale ahaan, 300kii qofba 1 ayaa u nugul heerka kolestaroolka LDL ee dhiigga oo aad u kordhay, taas oo kordhisa khatarta cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga. 1 ka mid ah 5-tii bukaan ee wadnuhu waxay leeyihiin qaab la iska dhaxlo oo ah dufan xad dhaaf oo dhiiga ah. Cilladaha kale ee hidde-sidaha ayaa laga yaabaa inay door ka ciyaaraan, laakiin kuwaas weli si sax ah uma cadda oo weli waa la baarayaa. Badanaa, cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga waxay ku lug yeeshaan arrimo dhowr ah oo isku jira.
Doorka cuntada ee cudurada wadnaha iyo xididada
Cunto caafimaad leh, dadku waxay yarayn karaan halista cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga. Golaha caafimaadku waxa uu qiimeeyay saamaynta cuntooyinka iyo nafaqooyinka ay ku leeyihiin khatartan. Waxay muujinaysaa in cunista cuntooyinka qaarkood ama nafaqooyinka ay la xiriirto khatarta hoose ee cudurrada wadnaha iyo xididada. Cuntooyinka kale ama nafaqooyinka kale waxay la xiriiraan khatarta sare ee cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Cunto ama nafaqo Waxay kordhisaa khatarta ah
Asidyada dufanka badan Cuduro wadnodaba-dheeraada
Hilibka cas Istaroog
Hilibka ama hilibka la warshadeeyay Istaroog
Beddelka aashitada dufanka buuxa leh ee polyunsaturated U yareyaa khatarta
Hilibka ama hilibka lawarshadeyay Cuduro wadnodaba-dheeraada
Khudaarta Cudurada wadnaha daba-dheeraada
masagada dhan iyo badarka Cudurada wadnaha daba-dheeraada
Fiberka (total) Cudurada wadnaha daba-dheeraada
Lowska iyo miraha Cudurada wadnaha daba-dheeraada
Malayga Cudurada wadnaha daba-dheeraada
Malay iyo asidka dufanta leh EPA+DHA Cudurada wadnaha daba-dheeraada
Qaxwo (qaxwo la sifeeyay) Cudurada wadnaha daba-dheeraada
Shaah madow iyi midka cagaaran Istaroog
Natiijooyinka ku saabsan xiriirka ka dhexeeya khamriga iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada dhiigga waxay muujinayaan labadaba xiriir wanaagsan iyo mid aan fiicneyn. Isticmaalka khamriga dhexdhexaadka ah (ilaa 15 g maalintii, ie. ugu badnaan 1.5 koob) waxay la xiriirtaa khatarta hoose ee cudurada wadnaha, laakiin isticmaalka sare wuxuu kordhiyaa khatarta istaroogga. Wax badan ka akhri khamriga hoostiisa.
talooyin ku saabsan ka hortaga cudurada wadnaha iyo xididada dhiiga
Cunto caafimaad leh sida uu qabo 'Schijf van Vijf', miisaan caafimaad leh iyo qaab nololeed caafimaad leh oo leh jimicsi ku filan, aan ahayn walaac badan iyo sigaar la'aantu waxay yaraynaysaa halista cudurada wadnaha iyo xididada.
talooyin ku saabsan cudurada wadnaha iyo xididada dhiiga.
Ma jiraan calaamado oo kuu muujinaya in xididdada dhiiggaagu ay xirmayaan? Dhiig kar ma qabtaa? Mise wadne xanuun ama istaroog ayaa kugu dhacay, tusaale ahaan? Caadiyan, cunto caafimaad leh waa qayb ka mid ah qorshahaaga daawaynta, marka lagu daro daawada. Cunista caafimaadka leh waxay ka qaybqaadataa daryeelka wanaagsan ee jidhkaaga iyo inaad dareento fiicnaansho. Dhakhtarkaaga ayaa mas'uul ka ah daawayntaada wuxuuna hubin doonaa inaad u baahan tahay kolestaroolka ama daawada cadaadiska dhiigga hooseysa. Dhakhtarkaagu wuxuu kuu diri karaa dhakhtarka cuntada. Sidoo kale, isticmaal oo kaliya alaabta leh sterols dhirta ama stanols, sida margarinnada gaarka ah iyo cabitaannada yogurt, oo ku tiirsan talada dhakhtarka.